वार्नर ब्रदर्सको बिरूद्ध $ ०० मिलियन डलर मुकदमा सj्घर्ष गरियो - आईहोरर
घर हरर मनोरन्जन समाचार वार्नर ब्रदर्सको बिरूद्ध $ ०० मिलियन डलर मुकदमा सj्यो
वार्नर ब्रदर्सको बिरूद्ध $ ०० मिलियन डलर मुकदमा सj्यो
by पल एलोइसियो मार्च 31, 2017
द्वारा लिखित पल एलोइसियो मार्च 31, 2017
अझै पनी सफलताको साथ कञ्जुरिंग २, यस्तो देखिन्छ कि यदि वार्नर ब्रदर्स डरावनी ट्रेनलाई केहि पनि रोक्न सक्दैन। आज सम्म, त्यो छ।
जेराल्ड ब्रटल, जसले १ 1980 .० को पुस्तकमा एड र लोरेन वारेनको कथा सुनाए Demonologist, वार्नर ब्रदर्सको विरुद्ध करिब एक अरब डलरको क्षतिको खोजी गर्दैछ? उसको केस? कञ्जुरिंग। र सबै सम्बन्धित कथाहरू उसको पुस्तकबाट चोरी भयो। यसमा दुबै सामिल छन् Annabelle र मूल कोन्जिंग फिल्म हलीवुड रिपोर्टर आज भन्दा पहिले यस कथालाई भत्काउने पहिलो मानिस थिए।
कसैले सोच्न सक्छ यो एक हास्यास्पद दाबी हो - आखिर, तपाईं कसरी एक सच्चा कहानीबाट चोरी गर्न सक्नुहुन्छ? - तर वास्तवमा जहाँ चीजहरू मुश्किल हुन थाल्छन्। सर्वप्रथम तपाईसँग कथन छ कि १ 1978 XNUMX मा, एड र लोरेन वारेन एकमा सहमत भए गैर प्रतिस्पर्धा प्रावधान। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यसको मतलब तिनीहरू उहाँसँग उनीहरूका कथाहरूमा हस्ताक्षर गरे। उहाँसँग अलौकिक अधिकार रहेको कुनै पनि कथामा उनीहरूको अलौकिक काम समावेश छ।
फिल्महरूको पछाडि निर्माण टोलीले लोरेन वारेनलाई फिल्म गर्न अनुमति पायो - तर यसको मतलब उनीहरूको सम्झौताको आधारमा स्क्वाट होइन, जुन आज पनि हो। र यो अझ चिपचिपा हुन्छ। त्यो सम्पूर्ण "सत्य कथा" चीज सम्झनुहुन्छ? ब्रेटलले अब वारेन्सलाई विश्वास गर्दैन।
If कोन्जिंग एक सही कथामा आधारित थियो, वार्नर ब्रदर्स भाग्य कम कटौती र शुष्क हुनेछ। तर ब्रटलले यो दावी गर्दैन Demonologist एक साँचो कथा छ। बरु, उनी भन्छन कि वारेन्सले सम्पूर्ण कथा बनायो। यदि त्यो कुरा हो भने, उहाँ आफ्नो पुस्तक कोल्पनको काम हो भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ, जुन उहाँ, वारेन्सको होइन, अधिकारको स्वामित्वमा छ।
ब्रिटलले पनि पुष्टि गरेको छ कि उनको पुस्तक पहिलो फिल्म लेख्नु अघि पढिएको थियो, जस्तो कि ट्वीटमा प्रमाणित छ जेम्स वान, जो प्रकट गर्न केवल एक द्रुत गुगल खोजी लिए। यो २०११ मा ट्वीट गरिएको थियो। कोन्जिंग उसी वर्ष पूर्व-उत्पादन प्रविष्ट गर्नुभयो। यो पुष्टि गर्दछ कि निर्देशकसँग पहिलेको ज्ञान थियो Demonologist।
म धेरै डरलाग्दा कथाहरू पढ्छु / पढ्छु। तर चुपचाप, डेमोनोलोजिस्ट, एड र लोरेन वारेनको वास्तविक जीवन खाता, मैले पढेको सबैभन्दा डरावना पुस्तक हो।
- जेम्स वान (@Creepypuppet) नोभेम्बर 30, 2011
यद्यपि ब्रटलको नयाँ दाबीको बावजुद कि यो पुस्तक अब फिक्शनको काम हो, उनको पुस्तकको वेबसाइटले ठीक उल्टो बताएको छ। साइटबाट:
डेमोनोलोजिष्ट एक गैर-काल्पनिक शीर्षक हो जुन १ 1980 .० मा पहिलो पटक प्रकाशित भएको थियो र त्यसबेलादेखि प्रिन्टमा रहन्छ।
यो ध्यान देने योग्य छ कि पुस्तकको लागि साइटमा पृष्ठको तल, प्रतिलिपि अधिकार अप-टु-डेट छ। यसको मतलव कि पुस्तक अझै पनि गैर-फिक्शनको कार्यको रूपमा मार्केटिंग भइरहेको छ।
जेम्स वान न त वार्नर ब्रदर्स न त कुनै टिप्पणी जारी गरिएको छ।
म यहाँ खबर रिपोर्ट गर्न आएको हुँ, के सोच्नु पर्ने भनेर बताउनको लागि। तर यदि तपाईं मेरो राय चाहनुहुन्छ भने, केहि यो मुद्दाको बारेमा एक सानो हास्यास्पद देखिन्छ। ब्रिटलको दाबी अलि अलि बढी देखिन्छ, र यो अझै पनि तपाईंको नाम तपाईंको बौद्धिक सम्पत्ती भएको कुनै चीजमा हुनु र यसलाई सही कहानीको रूपमा मार्केट गर्नु सही देखिदैन तर त्यसमा यो दावी गर्न तपाईं यसलाई वास्तविकतामा विश्वास गर्नुहुन्न। जे होस्, म न्यायाधीश होइन। मलाई थाहा छैन यो कानूनी प्रणालीमा कसरी प्ले हुन्छ। मलाई भावना छ कि हामी यस कथाको बारेमा अब छिट्टै सुन्नेछौं, त्यसैले एक नजर राख्नुहोस्।
र यसको लागि यसको मूल्यवान छ, म प्रेम गर्दछु द कञ्जुरिंग, र स्पष्टसँग भनौं भने, म यसलाई अझै रमाइलो गर्छु यदि यो सबै कल्पित कुराहरूमा जरा गाडेको भए पनि।
एड लोरेन वारेनएड वारेनगेराल्ड भंगुरकञ्जुरिंग।भूतविज्ञानीवार्नर ब्रर्स
अपरिचित जोखिम: Fil फिलिमहरूले देखाउँदछ कि किन तपाईंले कहिल्यै पनि अपरिचितलाई विश्वास गर्नु हुँदैन
आईटी ट्रेलरले २wide घण्टामा विश्वव्यापी हेराई रेकर्ड तोड्छ